China Lighting factory na ndị na-ebu ngwaahịa | Donghua
Ihe ndị a na-ejikarị eme ihe maka ngwa ọkụ bụ acrylic na polycarbonate. Acrylic plexiglass na polycarbonate sheets bụ akwụkwọ plastik siri ike ma na-adịgide adịgide nwere ohere ọhụụ nke kachasị elu. DHUA na enye otutu mpempe akwụkwọ acrylic maka ngwa ọkụ gị.
A na-eji acrylic anyị na-arụ ọrụ na-eme Light Light Panel (LGP). LGP bụ uzo acrylic transperent sitere na 100% Virgin PMMA. A na-arụnye ọkụ ọkụ na nsọtụ (s) ya. Ọ na-eme ka ìhè na-abịa site na ọkụ ọkụ na-ekpuchi ihu elu dum nke akwụkwọ acrylic. Emepụtara Light Guide Panel (LGP) kpọmkwem maka akara ngosi na ngosipụta ọkụ na-enwu enwu, na-enye ọmarịcha nhie na ọhụụ nke ọkụ.